Agro Chemical | SHWE THIT OO | Page 4
ရွေးချယ်ပေါင်းသတ်ဆေး Active Ingredient: Quizalofop P-ethyl …………. 10%Ec ရေ(၄)ဂါလန်တွင် ဆေးရည် (၃၀-၅၀)စီစီ ထိသေ အာနိသင်ရှိသော ရွေးချယ်ပေါင်းသတ်ဆေးဖြစ်သည်။ မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲပုပ်၊ နှမ်း၊ ပန်းနှမ်း၊ နေကြာ၊ မြေပဲ၊
ပြောင်းရွေးချယ်ပေါင်းသတ်ဆေး Active Ingredient: Atrazine ……… 50%SC ရေ(၄)ဂါလန်တွင် ဆေးရည် (၃၀-၄၀)စီစီ ပြောင်း၊ နှံစားပြောင်း၊ ကြံခင်းအတွင်းပေါက်ရောက်သော ရွက်ပြန့်ပေါင်းများ၊ မြက်မုံညှင်းမျိုးများနှင့် ၁နှစ်ခံမြက်များကို နှိမ်နင်းနိုင်သောရွေးချယ်ပေါင်း သတ်ဆေးဖြစ်သည်။ မြက်ကွမ်းသီးလေး၊ ဝက်လာ၊ တလိုင်းခေါင်း၊
စပါးရွေးချယ်ပေါင်းသတ်ဆေး Active Ingredient: Fenoxaprop-p-ethyl …………. 13%WP Pyrazosulfuron ………… 7%WP Quinclorac …………. 50%WP ရေ(၄)ဂါလန်ဝင် ဆေးမှုန့် (၂၀-၂၅)ဂရမ် စပါးပင် ထိခိုက်မှုမရှိပဲ ပေါင်းပင်ကိုသာ သေစေနိုင်သည့်အစွမ်းထက် ထိသေနှင့်
ပင်လုံးပျံ့ရွေးချယ်စပါးပေါင်းသတ်ဆေး Active Ingredient: Bispyribac-Sodium ……… 10%EC ရေ(၄)ဂါလန်တွင် ဆေးရည် (၂၀)စီစီ ပိုင်ရီမီသနော သိုင်အိုဘန်ဇိုရိတ် အုပ်စုတွင် ပါဝင်ပြီး ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိ ရွေးချယ်ပေါင်းသတ်ဆေးဖြစ်သည်။ စပါးခင်းတွင် ပေါက်ရောက်သော မြက်မျိုးများ၊ မြက်မုံညှင်းနှင့်ရွက်ပြန့်ပေါင်း များကို
ရွေးချယ်ပေါင်းသတ်ဆေး Active Ingredient: Pendimethalin ……….. 33%EC ရေ(၄)ဂါလန်တွင် ဆေးရည် (၁၀၀-၁၅၀)စီစီ ဝါ၊ ပဲမျိုးစုံ၊ မြေပဲ၊ နေကြာ၊ နှမ်း၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း၊ အာလူး၊ ငရုတ်၊ ခရမ်းချဉ်၊
ရွေးချယ်မဲ့ပေါင်းသတ်ဆေး Active Ingredient: Paraquate ……. 27.6% SL ရေ(၄)ဂါလန် ဆေးရည် (၁၀၀-၁၂၀)စီစီ ဘိုင်ပိုင်ရီဒိုင်လီယမ်အုပ်စုဝင် ရွေးချယ်မဲ့ထိသေ အာနိသင်ရှိ ပေါင်းသတ်ဆေးဖြစ်သည်။ ထိသေပေါင်းသတ်ဆေး အမျိုးအစားဖြစ်သဖြင့် ဆေးဖြင့်ထိသော အပင်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံး လျှင်မြန်စွာ လောင်ကျွမ်းခြောက်သွေ့သွားသည်။